Ciyaar 2048 Cayaaraha khadka tooska ah - 2048 Game
Ciyaar 2048 Cayaaraha khadka tooska ah
Yaa ogaa in ka dib markii ugu “Shimbiraha careysan” farxad leh, qabatimo “Threes”, iyo qosol ah “Flappy Bird”, waxaa ugu xiisaha kale arki doonaa 2048 ciyaarta online in qaadataa internetka by duufaan?
Haa, 2048 , kulan xujo cusub oo uu leeyahay dareen ugu dambeeyey ee kulan la qabatimo.
2048 waa ciyaar cusub caan-hal ciyaaryahan xujo for mobile iyo web. Waa nooc qiime xujo block a, sida in Threes ugu, laakiin halkii ay ka tallaabadaas threes, halkan aad dhigma mid ka mid ah laba ka dusiyeen haysta tiro isku mid ah.
Theme Ciyaarta ayaa ku salaysan ciyaarta jir-timey xujo, Klotsk, taas oo ahayd mid ah Roobka a noq-mid ah? 2048 sidoo kale ku lug leedahay xisaabta sida noq ah. The 2048 kulan xisaabta qabow waa soo jiidasho leh, waxaana lay maydhan biyaha hubi, aad u jecel doonaa.
Ujeedada ugu weyn ee 2048 waa in la isu geeyo dhammaan lambarada in ay soo bandhigeen on dusiyeen ilaa ay ka gaarayso 2048 ka hor inta aad ka mid ah qolka.
A da’yarka dalka Talyaaniga 19-sano jir ah iyo barnaamijyada, Gabriele Cirulli, dhisay this xiiso 2048 ciyaarta . Ciyaarta waa web-ku salaysan, oo aad ka ciyaari karaa via labada mobile iyo web.
Isla marka aad bilowdo ciyaaro 2048 kulan, i aaminaad aad u yeelan doontaa daqar, waxaa aad, aad u qabatimo !!
Sidee 2048 shuqullo lahayn?
Ma adag tahay in ciyaaro 2048 iyo in la fahmo ay xisaabta cajiib ah?
No, ma dhan, tan waxaa lagu caajiso xisaabta aljebrada, waxaad u baahan doontaa wax yar uun ilbidhiqsi si ay u fahmaan isku geynta iyo ka heli hang ee gameplay ah, mar alla markaad ogaato, waxa ee kaca !!
Waxaad noqon doontaa champ ah !!
2048 bandhigay 4 × 4 xidhka. Sidaa darteed marka aad bilowdo 2048, aad arki doonaa laba ka dusiyeen on xirneeyn, mid kasta oo shows leben tirada midkood 2 ama 4.
Waxaad riixi kartaa furaha arrow ee keyboard aad u guurto ka dusiyeen, kuwaas oo ku wareegsan iyo sidoo kale dhalin dusiyeen cusub ayaa sidoo kale 2 ama 4.
Marka laba ka dusiyeen qiimo isku mid ah midba midka kale isku, ay xirmaan in ay soo saaraan hal xabbad leben sare, kaas oo qaab wadarta labada dusiyeen.
In badan oo aad ku xeeran ciyaaro, sare ka dusiyeen ka heli doontaa, iyo guddiga wuxuu noqon doonaa more isugu. Goolka Your kama dambaysta ah waa in la gaarin 2048 ka hor inta uusan soo baxeen qolkaaga on board.
Sidee ku guuleysto in 2048 – Talooyin iyo tabaha 2020
Inkasta oo xisaabta ka dambeeya kulankan farxad leh waa mid aad u fudud, ciyaarta 2048 laftiisa u baahan tahay istaraatijiyad wanaagsan ah oo xoogaa u babac dhigaya.
Tan waxaan ku sameeyey waqti badan; Waxaan ahay caadaysatay in kulankaan, saaxiibtay noqdo waalan waqtiga oo dhan markay ciyaara oo aanu gaadhi 2048 .
Waxaa laga yaabaa inaad la yaaban sida ay u gaaraan 2048 sida ugu dhaqsaha badan, sababtoo ah aadan rabin in ay ku dhajisan ka dusiyeen kun oo waqti. Aynu eegno qaar ka mid ah talooyin ku shaqeeya iyo tabaha;
Fahmaan guuro dusiyeen;
In 2048 ciyaar aad leedahay dhaqdhaqaaqa afar kaliya kor-hoos iyo bidix midig. Mar kasta oo aad ku dhajisan, dusiyeen guurto mowqifkeeda. Dusiyeen soo bandhigaan oo kaliya 2 ama 4 lambarada, iyo marka isku mid kasta oo kale, tirada noqdo sare, simanyihiin in wadarta kuwa laba ka dusiyeen.
Sidaas waxa fiican in ay ku dhaqmaan oo ku filan si ay u fahmaan dusiyeen guurto, in badan oo aad ku ogaan 2048 geynta ah, ayaa in ka badan fursadaha aad gaadho 2048 si deg deg ah.
Ha ka dib markii dusiyeen weyn ma aan tegi
Waxaa laga yaabaa inay ku adag tahay in ay iska caabin duufsasho iyo tagaa ka dib markii dusiyeen waaweyn on board si ay u isu geeyo. Waxaa inta badan kuu gelineysaa in xaalada aad u adag, sidaa darteed waxay door bidaan in ay isku la dusiyeen yar tiriyey iyo play istaraatijiyad.
Isku day in aad sii joogo geeska
Waxaa fiican inaad u guurto ka dusiyeen at geesood iyo in la hubiyo in aad leedahay guddiga ku filan oo ay keenaan dusiyeen cusub. Dadka, kuwaas oo ah koox ka dusiyeen galay geeska, sheegan in ay gaaraan 2048 ugu dhakhsaha badan.
Isku day in aad soo dejin dusiyeen cusub dhexe ka dibna mari ee geeska inuu isku daro dadka kale.
Ka fikir hor inta ku biiro
Mararka qaarkood ma aad malayn karaa waxa ay noqon kartaa dhaqaaqo ugu fiican, ha is dhiibin haddii aad ma aysan samayn wax wanaagsan u dhaqaaqo. 2048 dalabyo aad fursado badan oo in lagu iibin doono ka dhaqaaqo xun, inta aad leedahay qol madhan on board.
Haddii aad la wareersan tihiin waxa dhaqaaqo fiican yahay, mar kale qabaa meesha kaararka on board ciyaarta yihiin, iyo haddii ay u baahan tahay in la bedelo ka hor inta fikirka ku saabsan kaadhadhka cusub.
Tag ka dib markii dusiyeen in la midowdo dusiyeen badan
Waxaad heli doonaa fursad marar badan in la isu geeyo dusiyeen badan, isku day in aad soo ururshay dhaqaaqo kuwan.
Qaado sidan, in badan oo aad sii boos lacag la’aan ah guddiga, si fiican fursad idin keeni kaararka cusub.
Iyadoo hal dhaqaaqo, kaliya idinku badali card aad Mire Waqaf oo la mid cusub. Iyadoo la card badan, aadan oo kaliya keeni card mid, laakiin sidoo kale takhalusaya kaararka badan oo ku saabsan guddiga.